Hoggaanka Alshabaab oo go’aan adag ka qaatay xubnaha ku biirayo Kooxda Daacish. – Radio Dalsan FM 91.5 MHz | Warar Sugan | Somalia News
Dagaalamayaasha Xarakadda Alshabaab ayaa ku goodiyey inuu qoorta ka jari doonaan xubin kasta oo ka tirsanUrurka Alshabaab ee ku biirta Kooxda Daacish, kana hortimaada Mucaahadada Isbahaysiga Alshaabaab iyo Ururka Alqaacida.
Sarkaal sare oo ka tirsan Alshabaab oo lagu magacaabo Abu Cabdalla ayaa waxa uu Farriintaasi Digniinta xalay ka sheegay Idaacadda ku hadasha magaca Xarakadda Alshabaab.
“Haddii uu qof yiraahdo waxaan taageersanahay Dhaqdhaqaaq kale oo Islaami ah, ku-dila isla goobta uu joogo” ayuu yiri Abu Cabdalla, wuxuuna sii raaciyey inay qoorta ka jari doonaan qof kasta oo wax u dhimayo Midnimadda Alshabaab.
Sarkaalkaasi waxa uu tilmaamay inay Alshabaab weli mideysan yihiin, wuxuuna ku eedeeyey Dowladaha Caalamka inay doonayaan inay kala qeybiyaan Xarakadda Alshabaab, waa sida uu hadalka u yiri.
“Tani waa go’aan horey loo wadaagay, qofkii doonaya inuu ku biiro koox kale oo Islaami ah waa inuu Waddanka isaga baxaa, si uu Kooxahaasi kula kulmo halka ay joogaan” ayuu yiri Abu Cabdalla.
Waxa uu ku dhaartay inaysan ka istaagi doonin falalka kuwa faragelinta ku haya Xarakadda Alshabaab.
Hadalka Sarkaalkaasi ayaa waxa uu soo baxay, iyadoo ay Saraakiil ka tirsan Alshabaab oo isugu jira Soomaali iyo Shisheeye sheegeen inay doonayaan in lala midoobo Kooxda Daacish ee ka dagaalanta dalalka Syria iyo Iraq.
Waxaa la sheegay in la dilay xubno ku taliyey in Isbahaysi lala yeesho Kooxda Daacish, iyadoo Afhayeenka Alshabaab, Sheekh Cali Dheere ka digay in tallaabo adag laga qaadi doono kuwa doonaya inay carqaladeeyaan Mucaahadada ay Hoggaanka Alshabaab la galeen Ururka Alqaacida sannadkii 2012-kii.